Digniin laga soo saaray Roobab dabaylo wata oo kusoo wajahan Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Digniin laga soo saaray Roobab dabaylo wata oo kusoo wajahan Puntland
Wasaaradda Gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Xukuumadda Fedeaaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin ku socota dadka deggan deegaannada xeebaha ku teedsan ee ku yaalla Maamulka Puntland.
“Wasaaradda Gargaarka Mareeynta iyo Masiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ka digeysaa duufaano kusoo wajahan inta u dhaxeysa Boosaaso iyo Xaafuun, waxa ay daba socotaa roobka ka da’aya deeganada Puntland” ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday Wasaaradda.
Sidoo kale madaxtooyada Puntland ayaa ka digtay khatarta roobabka dabeylaha wata ee la saadaalinayo in ay ka da’ doonaan xeebaha Buntilaan, waxaana bulshada ku nool deegaanada xeebaha ah loogu baaqay in ay ka fogaadaan meelaha godan kalluumeysatudana ay muujiyaan taxadar badan.
“Dowladdu waxay Bulshadda ku wargelinaysaa inay taxadar dheeri ah muujiyaan xiligan oo roobab dabaylo wata laga saadaalinayo dhulka xeebaha teedsan ee Puntland. Dadku ha ka fogaadaan dhulka godan, kaluumaysatadu ha muujiso taxadar, waxaan illaahay ka baryaynaa in Roobabku noqdaan kuwo kheyr wata oo alle dadka wax ku yeellin” ayuu yiri afhayeenka Madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani.
Sida ay sheegtay Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, labadii sano ee la soo dhaafay waxaa sanadkiiba Labo jeer xeebaha Soomaaliya ku dhufta roobab dabeylo wata arrinkaas ayaan muujineysa saameynta isbedelka cimilida ee ku sii kordheysa Soomalaiya.